सुख्खा आँखा (DRY EYE) किन हुन्छ ? उपचार के छ ? - Bhiman Sero Fero
admin ८ कार्तिक २०७७, शनिबार ०२:२३
कम्प्युटर, ल्यापटप, मोवाइलको स्किनमा धेरै समय हेरिन्छ । यसको सोझो प्रभाव आँखामा पर्छ । यस्ता आधुनिक उपकरणको बढ्दो प्रयोगले, वायु प्रदूषणले पनि आँखामा क्षति पुर्‍याउँछ ।
Read English articles of Dry EYE in Eye Health Nepal
सुख्खा आँखा कसरी थाहा पाउने ?
– आँखा सानो हुनु